प्रतिनिधिसभाबाट संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएकाे छ। बैठकमा दुई सय ५८ सांसद उपस्थित थिए। उनीहरू सबैले संविधान संशोधनको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मत गरे । विपक्षीमा शून्य मत खस्यो । सरकारले वास्तविक भूमिअनुसारको नेपालको नक्सा निसान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो। त्यसैमाथि आज मतदान भएको हो । प्रस्तावको खारेजीको माग […]
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब छिमेकी मुलुक भारतसँग मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि वार्ता हुने बताएका छन्। नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै उनले भारतसँग भूमि फिर्ताका लागि वार्ता गरिने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संसोधनमा सर्वसम्मत मत देखिनु राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा राम्रो […]
सौल । आकर्षक उपहार सहित कोरियामा “टिकटक स्टार २०२०” शुरु भएको छ । स्टार स्टुडियोको आयोजना तथा स्टार रेमिटको प्रायोजनामा भैइरहेको टिक टक स्टार २०२० कोरियाबासी नेपालीहरुको आकर्षण देखिएको छ । प्रथम पुरस्कार निकोन कायमेरा (डबल लेन्स) सहित अन्य आकर्षक उपहार सहित आयोजना भएको यो प्रतियोगितामा यसरी भाग लिन सकिन्छ : प्रतियोगिताका नियमहरु : १.सहभागीहरु […]
इरानमा कोरोनाबाट संक्रमित हुने उनी सातौं उच्च सरकारी अधिकारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अरु कुनै पनि देशमा उच्च तहका यति धेरै सरकारी अधिकारीलाई उक्त भाइरसले छोएको छैन । उनी इरानका चार जना उपराष्ट्रपतिमध्ये महिला मामिलासम्बन्धी उपराष्ट्रपति हुन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि उनी अहिले घरमै क्वारेन्टाइन बसिरहेको इरानी मिडियाले जनाएका छन् । […]
कोरियामा आनन्द कार्की एकल साँझ कार्यक्रम हुने
सौल। कोरियाको राजधानी सउल स्थित दोङ्गदेमुनमा रहेको शुभेच्छा रेष्टुरेण्टमा यहि आउदो शनिवार आनन्द कार्की एकल साँझ हुने भएको छ । कोरिया भ्रमणमा रहेका आनन्द कार्कीलाई कोरियामा रहेका नेपालीहरुले कार्यक्रम राख्न अनुरोध गरेपछि आनन्द कार्की एकल साँझ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।यहि आउदो फेब्रअरी ८ तारिक शनिवार साँझ ८ बजेबाट शुरु हुने कार्यक्रममा गायक कार्कीका सुमुधर […]
एन आर एन को ग्लोबल कन्फरेन्समा सहभागी हुन चाहनेले सेप्टेम्बर १५ सम्म अन्तिम नामावली टिपाउनु पर्ने
सौल। एनआरएनको ग्लोबल कन्फरेन्समा सहभागी हुन चाहनेले सेप्टेम्बर १५ सम्म अन्तिम नामावली टिपाउनु पर्ने जनाईएको छ। एन आर एन कोरियाको अनुसार एनआरएनको ग्लोबल कन्फरेन्समा सहभागी हुन चाहने एन आर एन कोरियाका सदस्य हरुले सेप्टेम्बर १५ तारिख सम्म एन आर एन कोरियाको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ। सेप्टेम्बर १५ तारिख सम्म नाम दर्ता गर्ने सदस्यहरुले […]
राष्ट्रव्यापी हस्तलेखन प्रतियोगिताको फाईनल राउन्ड आइतवार हुँदै
काठमान्डौ/ बिध्द्यार्थी हरुको हस्तलेखनमा उत्प्रेरणा जगाउने उदेश्यले सन्चालन भैइरहेको ”राष्ट्रव्यापी हस्तलेखन प्रतियोगित- २०७५” को फाईनल राउन्ड फाल्गुन २६ गते आइतवार एक भब्य कार्यक्रमका बिच सम्पन्न हुँदैछ । काठमान्डौको रामशाहपथमा अवस्थित यगम्वर ब्यान्क्वोयट एन्ड पार्टी प्यालेसमा बिहान १० बजे देखी देशभरी बाट आउनुहुने जिल्ला विजयता बिध्द्यार्थीहरु बिच सम्पन्न हुने उक्त प्रतियोगिता को नतिजा दिउसो ३ बजे प्रकाशित […]
‘बादलभित्रको घामले’ ३ जना पाठकलाई २५ हजार पुरस्कार दिने !
सौल।साहित्य क्षेत्रमा लेखकहरुको लागि हजारौँ पुरस्कार स्थापना भइसकेको छ । तर पाठकलाई पनि सम्मान र पुरस्कार गरिने चलन शुरु हुदैछ । यो अवसर दिलाउदै छ निबन्धकार डोलिन्द्र प्रसाद शर्माको पुस्तक “बादल भित्रको घाम “ले । शमी साहित्य प्रतिष्ठानले बजारमा ल्याएको सो पुस्तक पढेपछि पुस्तकको क्रमशंख्या सहित प्रतिक्रिया पठाउने पाठकहरु मध्ये तीन जनालाई रु. २५ हजारको […]
अब तीन दिनमै बन्छ पासपोर्ट
काठमाडौं। सरकारले तीन दिन भित्रै राहदानी (पासपोर्ट) उपलब्ध गराउने भएको छ । याे समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्दै सो कुराको जानकारी दिए । नागरिकलाई सहज रुपमा राहदानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले भने, “अहिले अत्यन्तै […]
भारत मात्र हैन चीनले पनि मिच्दै नेपालको सिमा
काठमाडौं,साउन ०७ – चीनले दोलखामा करिब ९ बिघा नेपाली जमिन आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । नेपालले भने अस्वीकार गर्दे आएको छ । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार दोलखा लामाबगर गाविसको लेप्चा गाउँस्थित कोर्लाङपारी हिमालको टिप्चा चुलीमा सीमा चिह्न चिनियाँले नेपालतिर सारेपछि उत्पन्न विवाद अझै समाधान भएको छैन । सो क्षेत्रमा सीमा चिह्न नम्बर ५७ […]
नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा,कुन्-कुन देश कुन स्थानमा भारत सूचीमै परेन (फोटोफिचर)
बेलायतको ट्राभल गाइड बुकले पर्यटकीय गन्तव्यका लागि विश्वका १० सुन्दर देशहरुको सुची प्रकाशित गरेको छ। त्यस मध्य भ्रमणका लागि नेपाल पहिलो नम्बरमा परेको छ । सन् २०१६ मा भ्रमणका लागि बेलायतको रफ गाइडले प्रकाशित गरेको विश्वका १० उत्कृष्ट देशको सूचीमा नेपाल परेको हो । मुस्तांगकाे हिमाली क्षाेत्र ०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले थिलो […]
भारतमा उपचार गरेर फर्किएको भोलिपल्ट नै राष्ट्रकवि घिमिरे फेरि पुन: आईसीयूमा भर्ना
काठमाडौं । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे फेरि अस्पताल भर्ना भएका छन् । राष्ट्रकवि घिमिरे आइतबार ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् । उनको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ । राष्ट्रकवि घिमिरे शनिबार भारतमा उपचार गरेर फर्किएका थिए । घिमिरेका स्वास्थ्यामा सुधार भयो भनेर आएको भोलिपल्ट घिमिरे फेरी अस्पताल भर्ना भएका हुन् । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि घिमिरे जेठ पहिलो […]
रहस्यमै इतिहासका दुई घटना : दरबार हत्याकाण्डका १७ र मदन भण्डारी हत्याका २५ वर्ष
नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको आज (शुक्रबार)१७ वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यलगायत राजपरिवारका १० सदस्यले ज्यान गुमाउनुपरेको त्यो घटना अझै रहस्यमय नै छ । १७ वर्षअघि अर्थात २०५८ साल जेठ १९ गते आजकै दिन तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुनेगरी भएको सो हत्याकाण्डको सम्झना गर्दा अहिले पनि जनता शोकमग्‍न हुन्छन् । तर […]